Check-in Mon, Jan 24
Check-out Tue, Jan 25
Home LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာကလပ်
အစီအစဉ်မိတ်ဆက် B- ရမှတ်များတိုးပွားရရှိခြင်း B- ရမှတ်များအားအသုံးပြုခြင်း ပါဝင်လျက်ရှိသောဟိုတယ်များ မကြာခဏမေးမြန်းတတ်သော မေးခွန်များ
LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာကလပ်
LOTTE Hotel ဘွတ်ကာကလပ် ဆိုသည်မှာ LOTTE HOTELS & RESORTS များသို့ မကြာခဏ လာရောက်လည်ပတ်တတ်သော ဘွတ်ကာဧည့်သည်ဖြစ်သူများအတွက် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ အခန်း သို့မဟုတ် ကြိုတင် မှာယူမှုမှတ်တမ်းများအပေါ်မူတည်ကာ ပွိုင့်အမှတ်များအားသင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး LOTTE HOTELS သို့မဟုတ် LOTTE အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ၌ ငွေသားကဲ့သို့အသုံးပြုရန်အတွက် ပွိုင့်အမှတ်များကို ဘွတ်ကာကူပွန်များ သို့မဟုတ် LOTTE HOTELS ဆုချီးမြှင့်မှု LH ပွိုင့်အမှတ်များ အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ပွိုင့်အမှတ် အမည်- ဘွတ်ကာရမှတ်များ (B- ရမှတ်များ)
ပွိုင့်အမှတ် တန်ဖိုး- 100 B- ရမှတ် = 1 USD (LOTTE HOTEL ဆုကြေးများ LH ပွိုင့်ရမှတ်များအတွက်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း အတူတူပင် ဖြစ်သည်)
ပွိုင့်ရမှတ်များအား အောက်ဖော်ပြပါတို့အတွက် ရရှိနိုင်ပါသည် -
1) ကြိုတင်မှာယူထားသည့် အခန်း အခန်းနှုန်းထား
2) အစည်းအဝေးပွဲများ ၊ အခမ်းအနားများ၊ ပါတီပွဲများနှင့် အခြားသော စားပွဲသောက်ပွဲများအတွက် အသုံးစရိတ်
ရမှတ် စုဆောင်းရရှိမှု နှုန်း - အရောင်းချဈေးများ၏ 2% (အခွန်များ နှင့် ဝန်ဆောင်ကြေးကောက်ခံမှုတို့ မပါဝင်ပေ)
B- ရမှတ်များသည် ၎င်းတို့အား ရရှိပြီးချိန်မှ3နှစ် ပြည့်ပြီးနောက်တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။
LOTTE HOTELS & RESORTS ဘွတ်ကာ ကလပ် အစီအစဉ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု စည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
LOTTE HOTEL & RESORTS LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာ ကလပ် အစီအစဉ် (ဤမှစ၍ “ဤအစီအစဉ်” ဟုခေါ်ဆိုမည်) မှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ၊ အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ဆုလာဘ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။ အားလုံးသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် LOTTE HOTEL & RESORTS ၏ တစ်မူထူးခြားသော အမြင်ရှုထောင့်အရဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအား အကာအကွယ်ပေးရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ LOTTE HOTELs & Resorts သည် ဤအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ အထူး အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်များ၊ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ဆုကြေးများ အစရှိသည်တို့အား လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် LOTTE HOTEL & RESORTS သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအစီအစဉ်မှာ LOTTE HOTELs & Resort ရှိ အခွင့်ထူးခံ ဆုချီးမြှင့်ပေးမှု အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ဤစည်းကမ်းများအောက်တွင် ညွှန်းဆိုမထားသော အခွင့်ထူးခံ ဆုလာဘ်ပေးမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် အခွင့်ထူးခံ ဆုလာဘ်ပေးမှု အစီအစဉ်၏ စည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် အကျုံးဝင်စေရမည်။
အပိုဒ် 1 အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ရာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
1. ဤအစီအစဉ်သည် LOTTE HOTEL & RESORTS’ LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာကလပ် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆုလာဘ်ပေး အစီအစဉ်နှင့် ဟိုတယ်များနှင့် အပန်းဖြေနေရာများကို အသုံးပြုချိန်တွင် ပေးအပ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များထံ ပေးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အညီ ရေးသားထားသည့် အထူး အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
2. LOTTE HOTEL-လက်ခွဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါဝင်သော ဘွတ်ကာများသည် အောက်ပါအခြေအနေများအရ ဘွတ်ကာကလပ် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။
① LOTTE HOTEL-လက်ခွဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ပါဝင်သော ဘွတ်ကာများဆိုရာဝယ် လုပ်ငန်းသဘောအရ ခရီးသွားသူများနှင့် ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်သူများဖြစ်သည့် ကုမ္ပဏီ ဖောက်သည်များအတွက် အစည်းအဝေးများ၊ ပွဲအစီအစဉ်များနှင့် ပါတီပွဲများကို ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်ရန် အခန်းတစ်ခန်း ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်ပေးသူ သို့မဟုတ် ပွဲအစီအစဉ်များကို ကြိုတင်မှာယူပေးသူဖြစ်ပြီး လက်ခွဲကုမ္ပဏီအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးသော တစ်ဦးချင်းစီကို ဆိုလိုပါသည်။
② အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုမှာ တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သာဖြစ်ပြီး ကော်ပိုရိတ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကန့်သတ်တားမြစ်ထားပါသည်။
③ ခရီးသွား အေဂျင်စီများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့် ပွဲစီစဉ်သော အေဂျင်စီများကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်ကြေးယူ၍ ရက်ချိန်းဘွတ်ကင်လုပ်ပေးရာတွင် အထူးလုပ်ကိုင်ပေးသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိ တစ်ဦးတစ်ချင်းစီအား အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုမှ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားပါသည်။
④ အစိုးရ အရာရှိများ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းပါ အပုဒ် 13 နှင့်အညီ ကိုရီးယား အစိုးရဝန်ထမ်းများအား အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုမှ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားပါသည်။
3. LOTTE HOTEL & RESORTS ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ နယ်ပယ် အတိုင်းအတာသည် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။
① SIGNIEL (SEOUL ၊ BUSAN)
② LOTTE HOTEL (SEOUL ၊ WORLD ၊ BUSAN ၊ JEJU ၊ ULSAN ၊ HANOI ၊ SAIGON ၊ GUAM ၊ Moscow ၊ ST.PETERSBURG ၊ VLADIVOSTOK ၊ YANGON ၊ SEATTLE)
③ L7 Hotels (MYEONGDONG ၊ GANGNAM ၊ HONGDAE)
④ Lotte City Hotels (Gimpo Airport, Guro, Mapo, MYEONGDONG, Daejeon, Jeju, Ulsan)
⑥ အနာဂတ်တွင် ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်သွားမည့် အခြား LOTTE HOTEL & RESORTS များ
ဤဝန်ဆောင်မှုအား ကမ်းလှမ်းမထားသော နေရာမှာ- LOTTE HOTEL NEW YORK PALACE, LOTTE HOTEL SAMARA, LOTTE City Hotel Tashkent Palace, LOTTE City Hotel Kinshicho, LOTTE RESORT JEJU, LOTTE RESORT Sokcho, နှင့် LOTTE RESORT Buyeo.
4. ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသော “LOTTE အခွန်အခမဲ့ဆိုင်များ” သည် ကိုးရီးယားအတွင်းရှိ ဆိုင်များကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အခြားသော နိုင်ငံများရှိ ဆိုင်ခွဲများနှင့် အင်တာနက် DFS နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပေ။
5. ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် အခြေအနေများအောက်တွင်ရှိသော ဘွတ်ကာ ကလပ် ဆုလာဘ်ပေးမှု ရမှတ်များကို B ရမှတ်များအဖြစ် ရည်ညွှန်းပါသည်။
6. လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အင်တာနက် LOTTE HOTEL & RESORTS သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များ၊ ထို့ပြင် B ရမှတ် စနစ်တို့အား အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ အပြောင်းအလဲများအား လိုအပ်သလို အသိအမှတ်ပြုသွားမည်။ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းနှင့် ၎င်းပြောင်းလဲလိုက်သော အချက်အလက်များအား ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများထဲမှ အနည်းဆုံး နှစ်နည်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ ကြိုတင်အသိပေး အကြောင်းကြားပါမည်၊ နည်းလမ်းများမှာ- ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ရေးသားသတိပေးချက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်တို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပူးတွဲပါတနာ ဆောင်ရွက်မှုအတွင်း မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်ဖက်သက် ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ဘဏ်ဒေဝါလီခံရမှု၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ သို့မဟုတ် စီးပွားရေး ဝန်းကျင်အခြေအနေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုများ အစရှိသည်တို့ကဲ့သော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် အပြောင်းအလဲများအား ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သည့် အခြေအနေများတွင်မူ ၎င်းအခြေအနေ ကျော်လွန်သွားပြီးသည့် နောက်မှသာ အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အသိပေးမှု ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်မှု အကြောင်းကြားချက်အား လက်ခံရရှိပြီးသည့်နောက် 1 လ အတွင်း မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများကိုမျှ တင်ပြလာခဲ့ခြင်း မရှိပါလျှင် ဤပြောင်းလဲလိုက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များအား သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်မည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များတွင် ပြောင်းလဲမှုများအား သဘောတူလက်ခံခြင်း မရှိသော အဖွဲ့ဝင်များအနေနှင့်ဖြင့် ၎င်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကန့်သတ်ချက်များအား ပြောင်းလဲမှုပြုသည့် ရက်စွဲမှစ၍ 1 နှစ်တာအတွင်း ၎င်းတို့၏ ရှိနေဆဲဖြစ်သော P ရမှတ်များအား ဆက်လက် အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်မည်။ ဤထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ် အဆုံးသတ်ပြီးသည့် နောက်တွင် ကျန်ရှိနေသော P ရမှတ်များ မှန်သမျှသည် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည်။
7. LOTTE HOTEL & RESORTS သည် ဤအစီအစဉ်အား ရပ်စဲခဲ့ပါလျှင် ၎င်းသည် အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် နှင့် ဟိုတယ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တို့ အပေါ်တွင် ဖျက်သိမ်းမှုမပြုမီ အနည်းဆုံ6းလ ကြိုတင်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု ပြုရမည်။ အနည်းဆုံးဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ အီးမေးလ် 1 စောင်ပေးပို့ပြီး၊ ဤအချက်အလက်အား ၎င်းတို့ထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားရပေမည်။
8. ဤအစီအစဉ် ရပ်စဲကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားချက်အား ပြုလုပ်ပြီးနောက် 1 နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် ကျန်ရှိနေသော ရမှတ်များသည် အလိုအလျောက် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးအား ဆက်လက် ကမ်းလှမ်း ထောက်ပံ့ပေးတော့မည် မဟုတ်ပေ။
9. ဤအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ခြွင်းချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော ဥပဒေလုပ်ထုံးကျင့်သုံးမှုများနှင့်အညီ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
10. ဤအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး လျှောက်လွှာ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုနှင့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် လျှောက်ထားသူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်၏ နေထိုင်အခြေချရာ ဧရိယာမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေများအား ချိုးဖောက်ခဲ့ပါလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုအတွက် လျှောက်ထားချက်အား ဖျက်သိမ်းကောင်း ဖျက်သိမ်းပါမည်။
11. ဤအစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပူးပေါင်းထားသော တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်သည် အစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသော ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပေသည်။ အစီအစဉ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာ ကုမ္ပဏီ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့်မလျော်ညီပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်မှုအတွက် အဖွဲ့ဝင်ထံတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများအား သဘောတူခြင်းဖြင့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အလုပ်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်သည် ဥပဒေဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ၏စည်းကမ်းများအားဆန့်ကျင်ချိုးဖောက်သော မည်သည့် လုပ်ရပ်မဆို ကျူးလွန်မိသည့်အခါ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အခြား ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝတ္တရားအပါအဝင် တာဝန်ခံမှုအားလုံးမှ ကင်းလွတ်ချန်လှန်ထားရန် LOTTE HOTEL & RESORTS နှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော ကုမ္ပဏီများက သဘောတူညီပါသည်။
12. LOTTE HOTEL & RESORTS သည် ၏သဘောတူညီချက်ပါ အပုဒ်2ပိုဒ်ခွဲ 1 တွင်ညွှန်းဆိုထားသည့်အတိုင်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု သတ်မှတ်ချက်နှင့် မပြည့်မီသော မည်သူမဆိုအား အဖွဲ့ပေးဝင်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်ကိုသီးသန့်ထားရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်အရည်အချင်း ပြည့်မီမှုမရှိတော့သောသူများအား အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် တရားမျှတမှုမရှိသောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိခဲ့သည့် ရမှတ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် ပေးချေမှုကို ဆိုင်းငံ့နိုင်သလို ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးဆုံးပြီးနောက် ထိုရမှတ်များကို တောင်းခံနိုင်ပေသည်။
13. ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာ အလေ့အကျင့်များအား ကိုးကားပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
14. ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပဋိပက္ခ အငြင်းပွားဖွယ် အခြေအနေများအား ပထမအကြိမ် အမှုစစ်ဆေးရန်အတွက် တရားစီရင်မှု တရားရုံးသည် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ၏ တောင်ကိုးရီးယားရှိ နေထိုင်ရာနေရာ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နေရာအပေါ် တရားစီရင်မှုပြုသည့် တရားရုံး ဖြစ်ရမည်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်သည် တောင်ကိုးရီးယား၌ နေထိုင်ရာနေရာ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိပါလျှင် ပထမအကြိမ် အမှုစစ်ဆေးမှုအတွက် တရားစီရင်မှု တရားရုံးသည် ဆိုးလ်ဗဟိုခရိုင်တရားရုံး (SEOUL Central District Court) ဖြစ်ရမည်။
အပိုဒ်2အဖွဲ့ဝင် စာရင်းသွင်းမှုနှင့် အကောင့် ဖန်တီးမှု
1. အနည်းဆုံး အသက် 19 နှစ် ပြည့်ပြီးသည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီသည် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် အခမဲ့ စာရင်းသွင်းကောင်း သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီထံသို့ အဖွဲ့ဝင်နံပါတ်နှင့် အကောင့်တစ်ခုအား ပေးအပ်ထားမည်။
2. အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုတစ်ခုထက်ပိုပြီး ထားရှိခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု အမျိုးမျိုး ရှိနေပါလျှင် (ကျပန်း ရွေးချယ်ထားသည့်) တစ်ခုမှ လွဲ၍ အားလုံးသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုများအား ဖျက်ပစ်မည်။ ဖျက်ပစ်ခံရသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု အကောင့်များပေါ်တွင်ရှိသည့် ရမှတ်များအား ကျန်ရှိနေသော အဖွဲ့ဝင် အကောင့်အတွင်းသို့ ပေါင်းထည့်ပေးမည်။
3. စာရင်းသွင်းမှု ကာလအတွင်း အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထံသို့ ဖွင့်ဟမှု ပြုမည်၊ မပြုမည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်ကောင်း ရွေးချယ်ရနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုချက်ပေးမထားပါက အဖွဲ့ဝင်သည် ဗောက်ချာများအသုံးမပြုနိုင်ပေ၊ အခြားပါတနာ ဝန်ဆောင်မှုအား မပေးအပ်နိုင်ဘဲ LOTTE HOTELs & RESORT ၏ ပါတနာ ဟိုတယ်များနှင့် မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ၊ LOTTE အခွန်အခမဲ့ ဆိုင် အစရှိသည်ထံမှ B ရမှတ်များနှင့် အခွင့်ထူး P ရမှတ်များကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် စုဆောင်းခြင်း မလုပ်နိုင်ပေ။
4. အဖွဲ့ဝင်များသည် ဤအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ရရှိပြီး ကမ်းလှမ်း ထောက်ပံ့ထားသော ရမှတ်များ၊ အထူး အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်များ နှင့် အမျိုးမျိုးသော အထူးအခွင့်အရေးများအား အလျဉ်းသင့်သလို စွန့်ပစ်ပယ်ရှားခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ အမွေရရှိမှု သို့မဟုတ် ဆက်ခံမှု အခြေအနေမှလွဲ၍ မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်မဆို အခြားသူများထံသို့ ၎င်းတို့အား ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းများ မပြုနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အာမခံထားနိုင်သော အခွင့်အရေးလည်း ပေးအပ်ထားခြင်း မရှိပေ။ ၎င်းအပြင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကို အမည်အပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှု မလုပ်နိုင်ပေ။
အပိုဒ်3အဖွဲ့ဝင် အခွင့်အရေးများ နှင့် ဖျက်သိမ်းမှု
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးမျိုးသော အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ အထူး အစီအစဉ်များ နှင့် ရရှိထားသော B ရမှတ်များ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး LOTTE HOTEL & RESORTS ထံသို့ မေးမြန်း၊ စုံစမ်းမှုပြုနိုင်သော အခွင့်အရေးအား ရရှိထားပြီး၊ LOTTE HOTEL & RESORTS သည်လည်း အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြောင်းအလဲများ၊ အသုံးဝင်သော ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် အဖွဲ့ဝင် ရရှိသော B ရမှတ်များ အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ၎င်းတို့ သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ အဖွဲ့ဝင်ထံသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားမှု ပြုကောင်းပြုပါမည်။ သို့သော် အဖွဲ့ဝင်များသည် အီးမေးလ်များသို့မဟုတ် စာတိုများလက်ခံရရှိခြင်း ကိုသဘောမတူလျှင် LOTTE HOTEL & RESORTS သည် ပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ကြန့်ကြာနေသည့် စာကြောင့်ဖြစ်သော မည်သည့် အားနည်းချက်မဆိုအတွက် တာဝန်ဝတ္တရားမရှိပါ။
2. အဖွဲ့ဝင်မှပါဝင်သော ကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာ သို့မဟုတ် အခြားသော အချက်အလက်များတွင် အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် LOTTE HOTEL & RESORTS သို့ အကြောင်းကြားရန် တာဝန်ရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် အဆိုပါ အချက်အလက်အား အကြောင်းကြားရန် ဖြစ်စေ အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုကို အသိပေးရန်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏ ပျက်ကွက်မှုကြောင့် ၎င်းတို့ တွေ့ကြုံရသော ဆုံးရှုံးမှုများ တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်ထံ၌သာလျှင် တာဝန်ရှိမည်။ ၎င်းအပြင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ခွင့်ရက်သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကုမ္ပဏီနှင့် မိတ်ဖက်မှု မရှိတော့သည့်အခါ ကော်ပိုရိတ် စာချုပ်ဝန်ဆောင်ကြေး အပါအဝင် ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု အရည်အချင်းများအား ကန့်သတ်သွားမည်။ LOTTE HOTEL & RESORTS သည် မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတဆင့် ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်၏ အလုပ်အကိုင်ကို စစ်ဆေးခွင့် သီးသန့်ထားရှိပါသည်။
3. B ရမှတ်များသည် ၎င်းတို့အား ရရှိပြီးချိန်မှ3နှစ် ပြည့်ပြီးနောက်တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးသည် ၎င်းအဖွဲ့ဝင် နှုတ်ထွက်သွားသည့်အထိ ဆက်လက် သက်ရောက်မှု ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူသည် LOTTE HOTEL & RESORTS ကြောင့်ဟု မယူဆနိုင်သော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါလျှင် ရမှတ်ယူမှုပြုချိန်အထိ ၎င်း၏ အသုံးမပြုရသေးသော ရမှတ်များ အားလုံးသည် ၎င်းနှုတ်ထွက်မှု သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်သော ရမှတ်များအား ပြန်လည် ရယူ၍ မရနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုရန်အတွက် ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အခွင့်ထူး ဆုလာဘ်ပေးမှု အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည့်အခါအခွင့်ထူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းမှ မရပ်စဲမချင်း ဝန်ဆောင် ပံ့ပိုးမှုအတွက် ပေးအပ်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရှိသွားမည်။
4. အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် အဖွဲ့ဝင် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများ အစရှိသည်တို့အား တရားဝင် အကြောင်းအရင်းမရှိဘဲ ရောင်းချခြင်း ကဲ့သို့သော အပြုအမူများဖြင့် ဤအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်ခဲ့ပါလျှင် သို့မဟုတ် အခြားသော ဥပဒေများ၊ ပြဌာန်းချက်များ အစရှိသည်တို့ကို ချိုးဖောက်သည့် ဥပဒေမဲ့ အပြုအမူများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါလျှင် LOTTE HOTEL & RESORTS သည် အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်၏ အခွင့်အရေးများအား ဖျက်သိမ်းကောင်း ဖျက်သိမ်းနိုင်ပေသည်။
5. အပိုဒ်3နှင့်4တွင်ဖော်ပြထားသည့် အဖွဲ့ဝင် အခွင့်အရေးများ ဖျက်သိမ်းမှုသည် ရရှိသော ရမှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှု၊ နှင့် အမျိုးမျိုးသော အထူးအခွင့်အရေးများအား ဖျက်သိမ်းမှု နှင့် အထူး အကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်များ အသုံးပြုမှု တို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
6. ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲတွင် 1 နှစ်ကြာသည့်တိုင် နာမည်စာရင်းပေး ဝင်ရောက်ခြင်း မပြုဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးမပြုသော အဖွဲ့ဝင်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သီးခြား၊ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အချက်အလက် မြင့်တင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု ကွန်ရက်များ နှင့် သတင်းအချက်အလက် ကာကွယ်ရေး အစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော ဥပဒေ၏ အပိုဒ် 29 စာပိုဒ်2မှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထိရောက် အကျုံးဝင်မှု ရှိသေးသော သက်တမ်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါ အဖွဲ့ဝင်များသည် အကန့်အသတ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုအား လက်ခံရရှိကောင်း ရရှိပေမည်။
အပိုဒ်4ရရှိသော ရမှတ်များ
1. အဖွဲ့ဝင်များသည် အစီအစဉ်၏ စည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများနှင့်အညီ B ရမှတ်များကို စုဆောင်းနိုင်ပေသည်။ အမျိုးမျိုးသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုကို စုဆောင်းရန် အဖွဲ့ဝင်သည် B ရမှတ်များကို ခွဲဝေမှုမပြုလုပ်နိုင်ဘဲ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ B ရမှတ်များကိုအခြားအဖွဲ့ဝင်ထံသို့ လွှဲပြောင်းမှုမလုပ်နိုင်ပေ။
2. အဖွဲ့ဝင်များသည် B ရမှတ်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် စုဆောင်းနိုင်ပေသည် -
① အခန်းကြိုတင်မှာယူပေးသော အေဂျင်စီမှတဆင့် တစ်ညလျှင် အခန်း9ခန်းနှင့် အောက်မှာယူခြင်းဖြင့် ရမှတ်များစုဆောင်းခြင်း - B ရမှတ်များသည် ဧည့်သည်တစ်ဦးမှ (ဘွတ်ကာ ကလပ်အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်) ဘွတ်ကာကလပ်အဖွဲ့ဝင် ကြိုတင်မှာယူထားသော အခန်းတွင် တည်းခိုးပြီးနောက် ရရှိထားသည့် US ဒေါ်လာသို့ လဲလှယ်ထားသည့် အခန်းနှုန်းထားများ အပြင် ဘွတ်ကာကလပ် တိုးပွားလာနှုန်း (ပေးချေမှု၏ 2%) တို့ဖြစ်သည်။
② တစ်ညလျှင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုနှင့် အုပ်စုအခန်းကြိုတင်မှာယူမှု 10 ခုနှင့်အောက်ပြုလုပ်ခြင်းမှတဆင့် ရမှတ်များစုဆောင်းခြင်း - B ရမှတ်များသည် ဘွတ်ကာ ကလပ်အဖွဲ့ဝင်မှ ကြိုတင်မှာယူထားသော ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုနှုန်းထားများ၊ အုပ်စုအခန်းကြိုတင်မှာယူမှုနှုန်းများမှ ကျသင့်ခဲ့သည့် US ဒေါ်လာအတိုင်း လဲလှယ်ထားသော အခန်းနှုန်းထားများအပြင် အများဆုံး 200,000 အထိစုဆောင်းခဲ့သည့် ဘွတ်ကာကလပ် တိုးပွားလာနှုန်း (ပေးချေမှု၏ 2%) ဖြစ်သည် B ရမှတ်များ သို့သော်လည်း အခွင့်ထူး P ရမှတ်များကို ဘွတ်ကာ ကလပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှပေးချေခဲ့သည် ပြည့်စုံသော ငွေချေဖြတ်ပိုင်းတွင်ပါဝင်သည့် အခန်းများအတွက် ဆုလာဘ် နှစ်ကြိမ်ပေးအပ်သွားမည် မဟုတ်ပေ။*
* အခွင့်ထူး ဆုလာဘ်ပေးမှု အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း စည်းကမ်းချက် 6-② ဟိုတယ်တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူမှ တိုက်ရိုက် ပေးချေခဲ့ခြင်း မရှိသော ပမာဏများ (ဥပမာအားဖြင့် ခရီးသွား အေဂျင်စီ၊ ကွန်ဗင်းရှင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းမှ ပေးချေသော အခကြေးများ အားလုံး၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ထံသို့ ပေးချေသော အခကြေးငွေများ၊ အစရှိသဖြင့်)
* သို့သော်၊ ဘွတ်ကာ ကလပ်အဖွဲ့ဝင်မှ ပေးချေထားသည့် ပြည့်စုံသော ငွေချေဖြတ်ပိုင်းတွင် ပါရှိသည့် အခန်းနှင့် ဘွတ်ကာ ကလပ်အဖွဲ့မှတည်းခိုနေထိုင်သော အခန်းများအတွက် အခွင့်ထူး P ရမှတ်များကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်။
* အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် စုဆောင်းမှု အခြေခံသဘောတရားသည် ကျွေးမွးဧည့်ခံမှုသာလျှင်- ပွဲအစီအစဉ်များနှင့် အခန်ကြိုတင်မှာယူမှု 10 ခန်းနှင့် အထက်အတွက် အကျုံးဝင်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
③ ①, ②, အတွက်မှာမူ US ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းသည် အခွင့်ထူးခံ အစီအစဉ်အတိုင်း ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းကို မိမိတို့ဝဘ်ဆိုက်တွင် အသိပေးအကြောင်းကြားထားပါသည်။ ၎င်းအပြင် အခွန်နှင့်ဝန်ဆောင်ကြေးမပါဝင်သော အခန်းနှုန်းထားကိုလည်းကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အစားအစာနှင့် အဖျော်ယမကာဝန်ဆောင်မှုတို့အပါအဝင် ဟိုတယ်အသုံးအဆောင်များ သုံးစွဲမှုကြောင့် ကျသင့်သော ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခန်းနှုန်းထားတို့မှာ B ရမှတ်များ စုဆောင်းရန်အတွက် စံမပြည့်မီပေ။
3. ရမှတ်အမှတ် 100 သည် 1 USD ၏ တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသည်။
4. အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်တိုင်မှ LOTTE HOTEL & RESORTS တွင် ကြိုတင်မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ဘွတ်ကာကလပ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှသာလျှင် ရမှတ်များကို စုဆောင်းနိုင်သည်။ စုဆောင်းမှုကို အရည်အချင်းမပြည့်မီသော နှုန်းထားများဖြစ်သည့် ကောက်ခံကြေးများအတွက် ကန့်သတ်ထားကောင်း ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါသည်။
① အရည်အချင်းပြည့်မီသော နှုန်းထားများဟုဆိုရာဝယ် ပိုဒ်ခွဲ4အပိုဒ်6နှင့်7အသီးသီးတွင်ဖော်ပြထားသည့် တိုးပွားလာသော နှုန်းထားမပါဝင်သော ကောက်ခံကြေးများကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ နှုန်းထားများမှာ စုဆောင်းမှုအတွက် စံပြည့်မီပါသည်။
5. ရမှတ်များစုဆောင်းရန်အလို့ငှာ သင်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခန်းကြိုတင်မှာယူမှုနှင့် LOTTE HOTEL & RESORTS ၌ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှု ပွဲအစီအစဉ်များ မှာယူမှုအတွက် ငွေပေးချေထားသော အထောက်အထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းသွင်းထားသော အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး မဖြစ်လာသေးမီ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝယ်ယူမှုများအတွက် ရမှတ်များအား ဆုချီးမြှင့်မည် မဟုတ်ပေ။
6. အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ကြိုတင်မှာယူပေးသော အေဂျင်စီမှမှာယူထားသည့် အခန်း9ခန်းနှင့်အောက် ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက် ရမှတ် စုဆောင်းခြင်းတွင် ထည့်သွင်းမထားပေ။
① အခမဲ့ ကောက်ခံမှုများ၊ အခြားသော ကုမ္ပဏီများထံမှ အင်တာနက်ခ ကောက်ခံမှုများ၊ ခရီးသွား အေဂျင်စီ နှုန်းထားများ၊ လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်း နှုန်းထားများ၊ ခရီးသွား အေဂျင်စီ ဝန်ထမ်း နှုန်းထားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှုများ သို့မဟုတ် အစုအသင်းများအတွက် အုပ်စုလိုက် နှုန်းထားများ၊ စာချုပ်အခန်း နှုန်းထားများ (သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားတစ်ခုဖြင့် ရေးသားချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူညီချက်အားဖြင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ဦးတို့အကြား ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း သတ်မှတ် အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွက် ရေရှည် အသုံးပြုရန် ဖယ်ချန်ထားသော အခန်းများ)
② အခန်းများအတွင်း ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးများတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည့် အခြားသော အခကြေးများ၊ အဝတ်လျှော်ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးများ၊ ပေးချေရသော TV ၊ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးစင်တာ၊ အင်တာနက် သို့မဟုတ် လက်လီ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမှုအတွက် အခကြေးများ၊ အခွန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကြေး ကောက်ခံမှုများနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး အခကြေးငွေများ
③ အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှု အသုံးအဆောင်များသုံးစွဲမှုအတွက် ကောက်ခံသည့် အခကြေးပမာဏ (အခန်းတွင်းစားသောက်ခြင်းနှင့် ဟိုတယ်မှတိုက်ရိုက်စီမံမှုမရှိသော အစားအသောက် အသုံးအဆောင်မှုအတွက် အခကြေးများ ပါဝင်သည်)
④ ကားငှားရမ်းခ၊ အနှိပ်ဝန်ဆောင်ခနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အသုံးအဆောင်များအတွက် အခကြေးများ
⑤ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာ၊ ပေါင်းခံ ချွေးထုတ်သည့် ပေါင်းခံအိမ်၊ ရေပူစမ်း သို့မဟုတ် ကာစီနို အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးများ
⑥ ဟိုတယ်ရှိ အစမ်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များအား အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးများ
⑦ မက်လုံးဆွဲဆောင်မှုများ မပါဝင်သော အတွဲ ခရီးစဉ်များအတွက် အခကြေးများ၊ အခမဲ့ နေထိုင်မှု နှင့် အစားအသောက်၊ ဖျော်ရည်ယမကာများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပြင်ပ အခကြေးများနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှု အခကြေးငွေအားလုံး
⑧ ခရီးသွား အေဂျင်စီများမှ ရောင်းချသော ဗောက်ချာများနှင့် ကူပွန်များ
⑨ အဖွဲ့ဝင်ကြေးများနှင့် ကဒ်သည် LOTTE HOTEL & RESORTS တွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုအားဖြင့် စီမံလည်ပတ်သော အထူး အစီအစဉ်များ အားလုံးအား ဝယ်ယူပေးသည်၊ ဤတွင် ကိုယ်လက်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး စင်တာနှင့် Trevi ကလပ် ကဲ့သို့ အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပြီး၊ ဟိုတယ် လက်ဆောင် အသိအမှတ်ပြုလွှာများ၊ ဘူဖေး လက်မှတ်များနှင့် အခြားသော ဗောက်ချာများ အတွက် ပမာဏများ ဝယ်ယူသည်။
⑩ ဘွတ်ကာကလပ်အဖွဲ့ဝင်မှလွှဲ၍ အခြားတစ်ဦးဦးမှ ဘွတ်လုပ်ထားသည့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှု ပွဲအစီအစဉ်များကြောင့် ကျသင့်သည့် အခန်းနှုန်းများနှင့် ပမာဏများ
7. အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများသည် တစ်နေ့လျှင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုပွဲများနှင့် အုပ်စု အခန်းကြိုတင်မှာယူမှု အတွက် အခန်း 10 ခန်းထက်ပို၍ ကြိုတင်မှာယူမှုမှတဆင့် တိုးပွားလာသော ရမှတ်များအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။
①အခမဲ့ နှုန်းထားများ၊ အခြား အင်တာနက် ပံ့ပိုးသူ နှုန်းထားများ၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခု၏ နှုန်းထားများ၊ လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်း အခကြေးများ၊ ခရီးသွား အေဂျင်စီ ဝန်ထမ်း အခကြေးများ၊ အထူး ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုများနှုန်းထားများနှင့် အောက်ပါရိုးရိုးဈေးနှုန်းဖြင့် ဈေးညှိထားသည့် အုပ်စုခန်း နှုန်းထားများ၊ ရေရှည်တည်းခိုသော ဧည့်သည်များအတွက် အထူးညှိယူထားသည့် နှုန်းထားများ
② ပိုဒ်ခွဲ4စာပိုဒ်6② မှ ⑩ အထိ အတွက် ကောက်ခံနှုန်းများ
8. ① တစ်နေ့လျှင် အခန်း9ခန်းနှင့်အောက်အတွက် ကြိုတင်မှာယူမှု ရမှတ်များကို ငေရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီးသည့် နေ့တွင် ရရှိသွားပါမည်။ ② တစ်နေ့လျှင် ကျွေးမွေးဧည့်ခံမှုပွဲများနှင့် အုပ်စု အခန်းကြိုတင်မှာယူမှု အတွက် အခန်း 10 ခန်းထက်ပို၍ ကြိုတင်မှာယူမှု ရမှတ်များကို ငွေပေးချေမှုအားလုံးပြုလုပ်ပြီးနောက် အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း 20 ရက်အတွင်း စုဆောင်းရရှိသွားမည် ဖြစ်သည်။
9. အခန်းတွင် ဧည့်သည်အရေအတွက် မည်မျှတည်းခိုခဲ့စေကာမူ အခန်းအရေအတွက်နှင့် အခန်းနှုန်းထားများပေါ်မူတည်ပြီး ရမှတ်များကို ဆုချီးမြှင့်သွားမည်။
10. ကြိုတင်မှာယူမှုကို တရားဝင်ပြုလုပ်ပြီးနောက် B ရမှတ်များမရရှိသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က ဟိုတယ်နှင့် စစ်ဆေးပြီးနောက်နှင့် ပေးချေမှုရက်စွဲမှစ၍6လအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်မစာမျက်နှာမှတဆင့် B ရမှတ်များ ရရှိရန်တောင်းခံမှု ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။
11. B ရမှတ်များကို အခွင့်ထူး P ရမှတ်များ သို့မဟုတ် လေကြောင်းလိုင်း မိုင်ပေါင်း တို့ဖြင့် အစားထိုးမှု မပြုလုပ်နိုင်ပေ။
12. အောက်ပါဟိုတယ်များ၌ တည်းခိုမှုဖြစ်စေ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပွဲများအတွက်ဖြစ်စေ ငွေပေးချေပြီးနောက် ရမှတ်များကို စုဆောင်းပေးပါသည်။ SIGNIEL (SEOUL ၊ BUSAN) ၊ LOTTE HOTEL (ဆိုး(လ်) (SEOUL)၊ WORLD ၊ ဘူဆန် (BUSAN) ၊ ဂျေဂျူ (JEJU) ၊ အူလ်စန် (ULSAN)၊ ဟနွိုင်း (HANOI) ၊ SAIGON ၊ ဂွမ် (GUAM)၊ မော်စကို (MOSCOW) ၊ ST.PETERSBURG (စိန့်ပီတာဘတ်) ၊ (VLADIVOSTOK) ၊ ၊YANGON ၊ SEATTLE)၊ L7 ဟိုတယ် (MYEONGDONG ၊ GANGNAM ၊ HONGDAE) ၊ LOTTE City ဟိုတယ် (Gimpo Airport ၊ Guro ၊ Mapo ၊ Myeongdong ၊ Daejeon ၊ Jeju ၊ Ulsan) နှင့် LOTTE အပန်းဖြေစခန်းများ။ LOTTE အခွန်အခမဲ့ ဆိုင်များ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား တွဲဖက်ပါတနာ ဟိုတယ်များနှင့် အခြားသော မိတ်ဖက်ပြုထားသည့် စတိုးဆိုင်များ အစရှိသည်တို့တွင် ဝယ်ယူမှုများအတွက် ရမှတ်များအား စုဆောင်းသွားမည် မဟုတ်ပေ။
13. ပေးအပ်ထားသော ရမှတ်များအား လဲလှယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် သေဆုံးသွားခဲ့လျှင် ၎င်းရရှိထားသော ရမှတ်များအား ဆက်ခံ ရယူခွင့် ရှိကောင်း ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပဒေရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အခွင့်အရေးများအား ကျန်ရစ်သူ အနီးစပ်ဆုံးသော မိသားစုဝင်များထံသို့သာလျှင် (စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား တင်ပြမှုနှင့်အတူ) လွှဲပြောင်းကောင်း လွှဲပြောင်းပေးမည်။
14. ဤအစီအစဉ်၏ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်သည့် အပြုအမူဖြစ်သည့် ရောင်းချလိုက်သော သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းလိုက်သော ရမှတ်များကို ဖျက်သိမ်း သို့မဟုတ် လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံရမည်။
ပိုဒ်ခွဲ5ရမှတ်များနှင့် ဗောက်ချာများ အသုံးပြုခြင်း
1. LOTTE HOTEL & RESORTS သို့မဟုတ် LOTTE အခွန် အခမဲ့ ဆိုင်များတွင် ဘွတ်ကာဗျောက်ချာတစ်ခုကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဓါတ်ပုံပါသည့် ID တစ်ခုပြသရမည်ဖြစ်ပြီး ဗောက်ချာသုံးစွဲရသည့် သင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဝန်ထမ်းထံ အသိပေးပါ။ ID ကတ်တစ်ခုအစား သင်၏ အခွင့်ထူး ကတ် (ယာယီကတ်၊ မိုဘိုင်း ကတ် သို့မဟုတ် ကတ်အမှန်) ကိုလည်း ပြသနိုင်ပေသည်။
2. အနည်းဆုံး ရမှတ် 1,000 (USD 10) အား စုးဆောင်းရရှိလာပြီဆိုလျှင် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအား LOTTE HOTEL & RESORTS ရှိ အစားအသောက်များ နှင့် အဖျော်ယမကာများအတွက် အသုံးပြုကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပေသည်၊ ထို့ပြင် အနည်းဆုံး ရမှတ် 10,000 (USD 100) အား စုဆောင်းရရှိပြီးလျှင် LOTTE အခွန် အခမဲ့ ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူမှု ပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေမည်။ (အချို့သော အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ပစ္စည်းများအတွက် ကန့်သတ်ထားပေသည်)
3. ရမှတ်များအား ကိုးရီးယား ပြင်ပရှိ ဒေသများမှ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာများအတွက် အသုံးပြုလျှင် ကုမ္ပဏီ၏ ဝဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် ကြိုတင်ပြီး ဗောက်ချာတစ်စောင်အား ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။
4. အစားအသောက်နှင့် ဖျော်ရည်ယမကာများအတွက် ရမှတ်များနှင့် ဗောက်ချာများအား LOTTE HOTEL & RESORTS လက်အောက်၌ တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲသော စတိုးဆိုင်များတွင်သာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာများသည် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု လက်အောက်မှ မဟုတ်သော စတိုင်းဆိုင်များမှ ဖြစ်လျှင် ရမှတ်များနှင့် ဗောက်ချာများအား အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပေ။
5. ဤအစီအစဉ်မှတဆင့် ရရှိထားသည့် B ရမှတ်များကို တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပေ၊ သို့သော် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာ သို့မဟုတ် အခွင့်ထူး P ရမှတ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး LOTTE HOTEL & RESORTS ဖြစ်စေ LOTTE အခွန်အခမဲ့ ဆိုင်များတွင်ဖြစ်စေ ငွေသားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပေသည်။ အခွင့်ထူး P ရမှတ်များကို အခွင့်ထူး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း သဘောတူညီချက်ပါ ပိုဒ်ခွဲ5အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲထားသည့် P ရမှတ်များကို ပြောင်းလဲပြီး တစ်နှစ်အကြာ ဒီဇင်ဘာလ 31 ရက်နေ့အထိ သုံးစွဲနိုင်ပေသည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာကို အဖွဲ့ဝင်များကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ပင်မစာမျက်နှာမှတဆင့် တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားရမည်။ ဗောက်ချာတစ်ခုကို လျှောက်ထားသည့်အခါ အမျိုးအစား (ယူနစ်)၊ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု နံပါတ်၊ အဖွဲ့ဝင် အမည်၊ နှင့်သုံးစွဲသူအမည်တို့ကို တိကျစွာဖော်ပြရမည်။
6. ထုတ်ပြန်ပေးထားသော ဗောက်ချာသည် ထုတ်ပြန်သည့်လမှစ၍ 1 နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်။
7. ထုတ်ပြန်ပေးထားသော ဗောက်ချာအား ဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ဘဲ တရားဝင်သည့်ကာလအတွင်း အသုံးမပြုသည့်အခါ အလိုအလျှောက်သက်တမ်းကုန်သွားမည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် ဗောက်ချာများမှာ တရားမဝင်တော့ပေ။
8. အဖွဲ့ဝင်များသည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ဗောက်ချာတစ်စောင်အား ထုတ်ပြန်ပေးရန် လျှောက်ထားကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ပေမည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား အလားတူ နည်းလမ်းဖြင့် နောက်ထပ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးရပေမည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား ၎င်းဗောက်ချာပေါ်တွင် အမည်ဖော်ပြထားသည့် အသုံးပြုသူသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား ထုတ်ပြန်ပေးပြီးသည့်နောက်တွင် ၎င်းအား သတ်မှတ်ထားသော အသုံးပြုမှု တည်နေရာ၌သာလျှင် အသုံးပြုနိုင်မည်။ အသုံးပြုမှု တည်နေရာသည် တွဲဖက်ပါတနာ ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် ဖြစ်လျှင် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်သည် ဗောက်ချာအား အသုံးပြုရန် ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိသော အဆိုပါ ဟိုတယ်ထံသို့ အခန်းမှာယူမှုတစ်ခု တိုက်ရိုက် ပြုလုပ်ရမည်။ LOTTE HOTEL & RESORTS သည် အသုံးပြုမည့် ဟိုတယ်များ ကြိုတင်မှာယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်မှန်သမျှအတွက် တာဝန်မယူပါ။
9. ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာတစ်စောင်အား အသုံးပြုချိန်တွင် ၎င်းဗောက်ချာပေါ်၌ အမည်ဖော်ပြထားသော အသုံးပြုသူသည် မိမိဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးရန် ၎င်းဘွတ်ကာ ဗောက်ချာနှင့်အတူ ID တစ်ခုအား ပြသရမည်။ အသုံးပြုသူသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်မူ ၎င်းဗောက်ချာအား အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
10. ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာအား ကိုးရီးယားရှိ LOTTE အခွန်အခမဲ့ ဆိုင်များတွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုင်မျိုးစုံတွင် ဗောက်ချာတစ်ခုတည်းအား ခွဲဝေ၍ အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ အခွန်အခမဲ့ဆိုင်တစ်ခုတွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပြန်ပေးလျှင် ၎င်းအတွက် ငွေပြန်မအမ်းနိုင်ပေ – ရမှတ်ကိုသာလျှင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု 10 ရက်အတွင်း ဆုအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်သွားမည်။
11. ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအား ငွေသားဖြင့်လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း မပြုနိုင်ပေ၊ ထို့ပြင် ဤနည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိထားသော ဗောက်ချာများအားလည်း အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
12. အသုံးပြုပြီးသည့်နောက် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာတစ်ခု ပေါ်မှ လက်ကျန်ပမာဏများကို ငွေပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရမှတ်များအဖြစ် ပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်ပေ။
13. LOTTE HOTEL & RESORTS ဖြင့်သက်ဆိုင်သော အမှားအယွင်းကြောင့် မဟုတ်သမျှ ကာလပတ်လုံး နုတ်ယူ၊ ဖြတ်တောက်ထားသော ရမှတ်များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုပြီးသော ဗောက်ချာများအား ပြန်လည် ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
14. LOTTE HOTEL & RESORTS သည် ပျောက်ဆုံးသွားသော သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရသော ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအတွက် တာဝန်မယူပါ။
15. LOTTE HOTELs & RESORTs သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းအခြေအနေပြီးနောက် သက်ရောက်မှုများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ လိုအပ်ပါလျှင် အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအား အသုံးပြုနိုင်သော ဟိုတယ်များ နှင့် အခြားသော မိတ်ဖက် စတိုးဆိုင်များအား အစားထိုးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
16. ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာများအား ဥပဒေနှင့်အညီ တားမြစ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ဒေသများတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးမည်။
အပိုဒ်6အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များ နှင့် အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များ
1. ဤအစီအစဉ်သည် အဖွဲ့ဝင်အဆင့်များဖြင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မပြုပေ။ ဤအစီအစဉ်၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးသည် တူညီသော ရမှတ်အရေအတွက်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို လက်ခံရရှိပါသည်။
2. ဤအစီအစဉ်မှ B ရမှတ်များကို P ရမှတ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရရှိသည့်အမှတ်များသည် အဖွဲ့ဝင်၏ အခွင့်ထူး အဆင့်မြှင့်တင်မှုပေါ် သက်ရောက် မှုမရှိပေ။ ၎င်းအပြင် ကြိုတင်မှာယူပေးသော အေဂျင်စီ၏ အခြားဖောက်သည်များမှ နေထိုင်ခဲ့သည့် တည်းခိုမှုအရေအတွက်နှင့် တည်းခိုထားသည့် ညပေါင်းအရေအတွက်တို့သည်လည်း အဖွဲ့ဝင်၏ အခွင့်ထူး အဆင့်မြှင့်တင်မှုပေါ် သက်ရောက် မှုမရှိပေ။
3. အဖွဲ့ဝင်များသည် LOTTE HOTEL & RESORTS မှ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ကမ်းလှမ်း ထောက်ပံ့ပေးထားသော အခြား အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များအား လက်ခံရရှိကောင်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ LOTTE HOTEL & RESORTS သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပိုင်း အခြေအနေများ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများအရ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းအခြေအနေပြီးနောက် သက်ရောက်မှု သော်လည်းကောင်း အားလုံးသော အထူး အကျိုးအမြတ်ခံစားခွင့်များနှင့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သက်ဆိုင်နေသည့် မိတ်ဖက် စတိုးဆိုင်များအား ပြောင်းလဲမှုပြုရန် လိုအပ်လျှင် အသိပေး အကြောင်းကြားချက်တစ်ခု ပြုလုပ်မှုနှင့်အတူ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပေသည်။
4. ဤအစီအစဉ်၏ အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များကို လက်ခံရရှိရန် ကြိုတင်မှာယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါ သင်၏ ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုအား LOTTE HOTEL & RESORTS ထံသို့ အကြောင်းကြားပါ။
5. ဤအစီအစဉ် နှင့် မိတ်ဖက် ဟိုတယ်များမှ အဖွဲ့ဝင်များထံကမ်းလှမ်းထားသည့် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ (LOTTE HOTELs & RESORT များမပါပေ) တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသော LOTTE HOTELs & RESORT များသည် အထက်ပါအကြောင်းရပ်များနှင့် ကွဲလွဲမှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
အကျုံးဝင်သက်ရောက်သော နေ့စွဲ - ဒီဇင်ဘာလ 21 ရက်၊ 2018
LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများသည် ဒီဇင်ဘာလ 21 ရက်၊ 2018 မှ စတင်၍ အကျုံးဝင်သက်ရောက်ပေမည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ခရီးသွားများအတွက် အခန်းများ ဘွတ်ကင် ကြိုတင်မှာယူမှုရန် တာဝန်ရှိသော အခန်းမှာယူသူ ဖောက်သည်များ
ကုမ္ပဏီကိုယ်စား အစည်းအဝေးများ ၊ အခမ်းအနားပွဲများနှင့် ပါတီပွဲများကဲ့သို့ စားပွဲသောက်ပွဲများကိုတာဝန်ယူ ထားသော အခမ်းအနားစီစဉ်သူ ဧည့်သည့်များ
အခန်းများကို ကြိုတင် မှာယူထားသော ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အခမ်းအနားများကို စီစဉ် ပေးထားသော ခရီးသွားအေဂျင်စီများ ဘွတ်ကင် အေဂျင်စီများအား မထည့်သွင်းရပါ။
LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှု အစီအစဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာကလပ်ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန်အတွက် နောက်ထပ် လျှောက်လွှာတစ်စောင်တင်သွင်းပါ။
LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှု နံပါတ်နှင့် စပ်လျဉ်းသော အသိပေးချက်များ
ဤအဖွဲ့ဝင်အစီအစဉ်သည် LOTTE ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ ကော်ပိုရိတ်ဘွတ်ကာများအတွက် ဖြစ်ပြီး စိစစ်အတည်ပြုမှုလုပ်ထုံး လုပ်နည်းပြီးဆုံးပါက မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်လျှောက်ထားသည့်အခါ သင့်အား အတည်ပြုလက်ခံခြင်းရှိမရှိကို လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရက် (7) ရက် အတွင်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့အသိပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှု မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Log in ဝင်ပြီးနောက် LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာကလပ်သို့ ဝင်ရောက်ရန်တောင်းဆိုခြင်း
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရက် (၇) ရက် အတွင်း အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ရလဒ်များကိုလက်ခံရယူခြင်း
အကယ်၍သင်သည် LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှု အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမဖြစ်သေးပါက LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာကလပ်သို့ ဝင်ရောက်ရန်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန် မှတ်ပုံတင်ပါ။
အကယ်၍သင်သည် LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှုအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီးပါက Log in ဝင်ပြီး LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာကလပ်သို့ ဝင်ရောက်ရန်လျှောက်ထားပါ။
LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာကလပ်သို့ ဝင်ရောက်လိုက်ပါ
အခန်းများ ကြိုတင်မှာယူပြီး B- ရမှတ်များ ရယူလိုက်ပါ
သင်သည် LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့လျှင် စီးပွားရေးကိစ္စ ခရီးသွားလာသူ ဧည့်သည်များအတွက် အခန်းများအား ဘွတ်ကင်မှာယူမှုပြုချိန်တွင် B- ရမှတ်များအား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
LOTTE ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေ စခန်းများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာ ကလပ်ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ပုံတင် လိုက်ပါ။
ကြိုတင်မှာယူမှု တစ်ခု ပြုလုပ်ရန်
LOTTE ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေ စခန်းများ အခန်းကြိုတင်မှာယူရေးရုံး သို့မဟုတ် အရောင်းရုံးမှတစ်ဆင့် ကြိုတင်မှာယူမှုများအားပြုလုပ်သော အခါ ကျေးဇူးပြု၍ သင်သည် ဘွတ်ကာ ကလပ်ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသူအား အသိပေးပါ။
သင့်အနေဖြင့် LOTTE ဟိုတယ် များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ၏ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်လည်း အခန်း များကိုကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ (Log in လိုအပ်သည်)
စာရင်းပိတ်ထွက်ခွာပြီးသောနေ့တွင် “My Page” ပေါ်ရှိ “Reservation Record” မှတစ်ဆင့် သင်၏ B- ရမှတ် ကိုရရှိစေသောကြိုတင်မှာယူမှု မှတ်တမ်းများကို သင်စစ်ဆေးကြည့် နိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်း/အော့ဖ်လိုင်း ခရီးသွား အေဂျင်စီများ၊ ဘွတ်ကင်ပြုလုပ်ပေးသော အေဂျင်စီများ သို့မဟုတ် GDS များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ကြိုတင်မှာယူမှုများ
အခမဲ့ နေရာထိုင်ခင်း၊ ဗောက်ချာများ အသုံးပြုပြီး ကြိုတင်မှာယူမှုများ၊ သို့မဟုတ် အထူး လျော့ချပေးထားသည့် နှုန်းထားများဖြင့် ကြိုတင်မှာယူမှုများ
အစည်းအဝေးများနှင့်အခမ်းအနားများ အတွက်ကြိုတင်မှာယူပြီး B- ရမှတ်များ ရယူလိုက်ပါ
သင်သည် LOTTE HOTEL ဘွတ်ကာ ကလပ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့လျှင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ ပွဲအစီအစဉ်များ နှင့် စားသောက်ဧည့်ခံပွဲများတို့အတွက် ဘွတ်ကင်မှာယူချိန်တွင် B ရမှတ်များအား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
စားပွဲသောက်ပွဲများအတွက် မည်သို့ ကြိုတင်မှာယူကာ ရမှ
LOTTE ဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေ စခန်းများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် စားပွဲသောက်ပွဲများအတွက် သင် ကြိုတင်မှာယူနိုင်သလို စုံစမ်းမေးမြန်းမှု များပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွန်ဗန်းရှင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ
သင် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်သွား မည့်ဟိုတယ်၏အရောင်းမန်နေဂျာ မှတစ်ဆင့်လည်း ကြိုတင်မှာယူမှု များကို သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အခမ်းအနားပြီးဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း B- ရမှတ်များအားရရှိမည် ဖြစ်သည်
သင် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်သွား မည့်ဟိုတယ်၏ စားပွဲသောက်ပွဲ အရောင်းမန်နေဂျာအားမေးမြန်း၍ သင်ရရှိမည့် B- ရမှတ်ပမာဏအား သင်စစ်ဆေး ကြည့်နိုင်သည်။
အေဂျင်စီများ (TMC, DMC အစရှိသဖြင့်)၊ အွန်လိုင်း/အော့ဖ်လိုင်း ခရီးသွား အေဂျင်စီများ နှင့် GDS မှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်သော ကြိုတင်နေရာမှာယူမှုများ
အထူးလျှော့ဈေးနှုန်းထားဖြင့် ကမ်းလှမ်းသည့် အချို့သော အစည်းအဝေးဆိုင်ရာအထူး အတွဲအဖက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခမ်းအနားပွဲများ (ဟိုတယ်ပေါ်မူတည်၍ အခြေအနေများ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်*)
ကြိုတင်နေရာမှာယူမှုများ ပြုလုပ်ချိန်တွင် စားသောက်ဧည့်ခံပွဲအတွက် တာဝန်ယူထားသည့် မန်နေဂျာနှင့်အတူ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရမှတ် စုဆောင်းရရှိနိုင်မှုအား စစ်ဆေးပေးပါ။
အခမ်းအနားပွဲတစ်ခုအတွက် သင် ရရှိနိုင်သော B- ရမှတ်ပမာဏ အများဆုံးမှာ B- ရမှတ်ပေါင်း 200,000 (အုပ်စုလိုက်အခန်းနှုန်းထားများ အပါအဝင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,000 ဝန်းကျင်ခန့်) ဖြစ်သည်။
B- ရမှတ်ရရှိမှုရလဒ်များကို အခမ်းအနားအတွက်ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရက် (30) အတွင်း My Page မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်၏ B- ရမှတ်များကို ကူပွန်ဖြင့် တန်ဖိုးသင့်ဝယ်ယူပါ
သင်၏ B- ရမှတ်များအား ကူပွန်တစ်စောင်အဖြစ် သို့မဟုတ် LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှုများ LH ရမှတ်များ (ယခင် အထူးအခွင့်အရေး LH ရမှတ်များ) ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ LOTTE HOTELS & RESORTS အတွက် သို့မဟုတ် ကိုရီးယားရှိ LOTTE အကောက်ခွန်လွတ်ဆိုင်များ အတွက် သို့မဟုတ် ကို ငွေသားကဲ့သို့ ပာင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဗောက်ချာ ထုတ်ပေးမှု နှင့် အသုံးပြုပုံ
သင်သည် စုပေါင်းတိုးပွားလာသော B ရမှတ်များအား My Page (ကျွန်ုပ်၏ စာမျက်နှာ) (ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့ဝင် အချက်အလက်) လက်အောက်ရှိ “Request B Point Voucher (B ရမှတ်ဗောက်ချာအား တောင်းဆိုရန်) မှတစ်ဆင့် ဗောက်ချာတစ်ခုအား ချက်ချင်း ထုတ်ပေးစေကာ အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ထို့ပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ LOTTE HOTELS & RESORTS များ၊ ထို့ပြင် ကိုရီးယားရှိ LOTTE ဂျူတီအခမဲ့ဆိုင်များတွင် အဆိုပါရမှတ်များအား ငွေသားကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LOTTE HOTELS & RESORTS 1,000/ 5,000/ 10,000 B ပွိုင့် ရမှတ် ဗောက်ချာများ
LOTTE အခွန်အခမဲ့ဆိုင် 10,000 B ရမှတ် ဘွတ်ကာ ဗောက်ချာ
အထူးအခွင့်အရေး LHI ရမှတ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ
စုပုံတိုးပွားလာသော B ရမှတ်များအား LOTTE HOTEL ဆုချီးမြှင့်မှု LH ရမှတ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး၊ အဆိုပါရမှတ်များအား ပေါင်းကာ LOTTE HOTELS & RESORTS များ နှင့် LOTTE အခွန်အခမဲ့ဆိုင်များတို့တွင် ငွေသားကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့် ရမှတ်များအား My Page (ကျွန်ုပ်၏ စာမျက်နှာ) (ကျွန်ုပ်၏ အဖွဲ့ဝင် အချက်အလက်) လက်အောက်ရှိ “Point Conversion Request (ပွိုင့်ရမှတ် ပြောင်းလဲပေးရန် တောင်းဆိုမှု) မှတစ်ဆင့် အထူးအခွင့်အရေး P ရမှတ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးရန် သင် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
သင်၏တောင်းဆိုမှုအားပြုလုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ရမှတ်ပြောင်းလဲမှုရလဒ် များကို လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရက် (၁ဝ) ရက်အတွင်း၌ သင့်အားအသိပေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်။
※ မပါဝင်သောဟိုတယ်များ - LOTTE NEW YORK PALACE, LOTTE HOTEL SAMARA, LOTTE City Hotel Tashkent Palace, LOTTE City Hotel Kinshicho, LOTTE RESORT Jeju, LOTTE RESORT Sokcho and LOTTE RESORT Buyeo
ကျွန်ုပ်သည် လက်ရှိ ရှိနေဆဲ Charlotte L Club အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ် လျှောက်လွှာအသစ်တစ်စောင် တင်သွင်းဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
ဤသည်မှာ Charlotte L ကလပ်ထက် သာလွန်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် အဖွဲ့ဝင်သစ် အစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သင် လျှောက်လွှာအသစ်တစ်စောင် တင်သွင်းရမည်။
* Charlotte L ကလပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၊ ၃၁၊၂၀၁၈ မှစတင်ကာ အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဂုဏျပွုစားပွဲ တစ်ခုကို စီစဉ်သူများစွာက စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးနေသည်။ ပိုပြီးတိုးပွားလာစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ B-ရမှတ်များအား ခွဲပိုင်းနိုင်ပါသလား။
B- ရမှတ်များကို အခမ်းအနားစီစဉ်သူ (၃) ဦးအကြားခွဲဝေနိုင်ပြီး B- ရမှတ် စုစုပေါင်းအနေဖြင့် B- ရမှတ်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ နှင့် ညီမျှ သည်) ဖြစ်နေဦးမည် ဖြစ်သည်။ B- ရမှတ်များအားရရှိသူတိုင်းသည် LOTTE ဟိုတယ်ဘွတ်ကာ ကလပ်ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ပုံတင် ထားပြီးဖြစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်၏ B- ရမှတ်များပျောက်ဆုံး နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။
“ပျောက်နေသော B- ရမှတ်အတွက် စုံစမ်းခြင်း” မှတစ်ဆင့် ကျေးဇူးပြု၍ အွန်လိုင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ပါ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်ခွဲရှိ အရောင်းမန်နေဂျာအား မေးမြန်းပါ။
ပျောက်နေသော B- ရမှတ်အတွက် စုံစမ်းခြင်း
အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျွန်ုပ် မဝင်မီ ကျွန်ုပ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အခန်း နှင့် စားသောက်ဧည့်ခံပွဲ ကြိုတင်နေရာမှာယူမှုများအတွက် ကျွန်ုပ် ရမှတ်များ ရရှိနိုင်ပါမည်လား။
အခန်းကြိုတင်မှာယူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် အတွက် သင်မှတ်ပုံတင် ခဲ့ခြင်းမရှိမီ ကပြုလုပ်ခဲ့သော ကြိုတင် မှာကြားမှုများအတွက် သင် ရမှတ်များ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ဧည့်သည်များ ရောက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ သေးပါက သင်၏အဖွဲ့ဝင်အချက် အလက်များကိုထပ်ဖြည့်ပေးပြီးအမှတ်ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဟိုတယ်ကြိုတင်မှာယူရေးရုံး သို့မဟုတ် အရောင်းမန်နေဂျာထံသို့ ဆက်သွယ်ရယူပါ။ စားသောက်ဧည့်ခံပွဲ အစီအစဉ်များ အတွက်မူ သင်သည် Booker Club (ဘွတ်ကာ ကလပ်) သို့ ဝင်ရောက်ထားပြီး၊ စားသောက်ဧည့်ခံပွဲ အတွက် တာဝန်ယူထားသည့် အရောင်း မန်နေဂျာထံသို့ ပွဲမတိုင်မှီ သင်၏ ဘွတ်ကာ ကလပ် B-ရမှတ်များအား တောင်းဆိုထားမှသာလျှင် အမှတ်များအား သင် ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီ၌ ကျွန်ုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ B- ရမှတ်များ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည်လော။
မကုန်ဆုံးပါ။ B- ရမှတ်များကို လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းထံသို့ ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ၄င်းရမှတ် များသည် သင်၏အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆက်စပ်ခြင်းမရှိဘဲ သင်၏စာရင်း အတွင်း၌ ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သင် အလုပ်အကိုင် များအားစွန့်လွှတ်ပြီး သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပါက အရောင်း မန်နေဂျာထံသို့အသိပေးထားရန် ကျေးဇူးပြု၍ သေချာပါစေ။